Hordhaca kulanka Bayern Munich vs Liverpool lugta labaad ee Champions League – Walaal24 Newss
Hordhaca kulanka Bayern Munich vs Liverpool lugta labaad ee Champions League
March 13, 2019	0	By walaal24
Jurgen Klopp ayaa ku laabtay Jarmalka si uu u qaato khibradiisii ​​hore, iyadoo Liverpool ay u safreyso Bayern Munich lugta labaad ee wareega 16ka Champions League Arbacada.
Bayer Munich ayaa ku guuleysatay dhowr ciyaaryahan oo Klopp Borussia Dortmund intii uu ku sugnaa Jarmalka, sidoo kale waxa ay jabiyeen wadnaha Dortmund finalka Champions League ee 2013, xitaa haddii Klopp uu ku guuleystay Bayern si uu ugu guuleysto horyaalkii Bundesliga ee 2010/11 iyo 2011/12. .
Kulanka ugu danbeeya ee Klopp ee Bayern ayaa ah mid adag, iyadoo Liverpool ay barbaro goolal la’aan ah la gashay Anfield, lakiin waxa ay soo xirteen Bayern, waa ogtahay inay goolka martida ah ka dhigan tahay inay Bayern u baahan tahay inay labo gool dhaliso si ay ugu soo baxaan sideedii udambeeyay.
Si kastaba ha ahaatee, rikoorka Liverpool ee ka baxsan gurigeeda Yurub ayaa ah mid aad u fiican xilli ciyaareedkan, iyadoo laga badiyay seddexdii kulan ee wareega group-yada, oo ay ku jirto Red Star Belgrade. Xaqiiqdii, goolka kaliya ee Liverpool ee seddexda kulan ee Champions League xilli ciyaareedkan waxa uu ahaa rigoore James Milner kulankii Paris Saint-Germain.
Tan iyo markii lugta Anfield, Bayern ayaa badisay seddex kulan oo isku xigta, iyagoo dhaliyey 12 gool tartankan, si ay ugu soo laabtaan hogaanka Bundesliga, waxaana ay doonayaan inay gaaraan wareega 8da ee Champions League xilli ciyaareedkii sideedaad oo isku xigta, iyadoo ku guuldareysatay wareega 16ka xilli ciyaareedkii 2010/11 kulankii Inter Milan.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Liverpool Naby Keita ma uusan safrin 21-ka ciyaaryahan ee u duulay Germany. Xiddiga reer Guinea ayaa seegay dhaawac yar oo uu ku qasbay inuu sii joogo Merseyside.
Daafaca Trent Alexander-Arnold, oo laga saaray kulankii ay Axadii la ciyaareysay Burnley, iyo ciyaaryahanka khadka dhexe ee James Milner, oo seegay kulanka muruqa muruqa, ayaa labadoodaba ku jiray kooxda socdaalka.
Kooxda difaacaneysa Bayern Munich ayaa waxaa ka maqan ciyaaryahanada kala ah Joshua Kimmich iyo Thomas Muller, halka Arjen Robben iyo Corentin Tolisso (jilibka) ay sidoo kale ka maqan yihiin.
David Alaba iyo ciyaaryahanka khadka dhexe ee Kingsley Coman ayaa diyaar ah ka dib markii uu ka soo kabsaday dhaawacyo dhowaanahan halka Bayern ay la filayo inay James Rodriguez u dhiibto doorka khadka dhexe
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Barlamaanka Soomaaliyeed oo Dalka dib ugu soo Laabtay
Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka oo sheegay in ay soo badanayaan Tirada Maleyshiyaadka Al-shabaab ee kasoo goosta
Wasiiru dowlaha Arrimaha Dibadda XFS oo ka guddoomay nuqul ka mid ah warqada danjiranimo Safiirka Indonesia